“Caqli nimuu ku weynyahay ma cuno calafka qaarkiise”
Jawaab qoraalkii CAGTII JOOGSAN WEYDAA MAR BEY CEEB LA KULANTAA
Akhristayaal waxaa jirtay in gabyaa la yiraahdo Aadan-Carab uu gabay u tirshay Cali-Dhuux iyo Ismaaciil Mire. Ismaaciil Mire gabay buu ugu jawaabay laakiin Cali-Dhuux wuxuu ku soo gaabiyey hadalkii:
Cad hadduu carrada kaaga dhaco amase ciidoobo
Caqli nimuu ku weynyahay ma cuno calafka qaarkiise
Anigana carruuraha yaryari waa iga caynkaase
Maxaan Aadan Carab kala hadlaa caaqil baan ahaye.
Waxaa jira nin sheegtay Farah Warsame oo horay jawaab iigu soo diray asaan ka gaabsaday jawaabtiisa markaan arkay in aysanba xambaarsanayn wax loo jawaabo. Hadda wuxuu ugu sheegay “virus”. Waxaan islahaa ma wuxuu dhihi doonaa diin baad cayday laakiin sheekadiisu C/hi Yuusuf iyo maxaad diinta usoo daliishataa buu ka bixi waayey. Maqaalkaygii hore ayaan arrintaas ku sharxay. Waxaadba moodaysaa inuu isleeyahay ninkaas ka xanaaji si uu maqaal usoo qoro.
Hadda laga bilaabo waxaan u jawaabayaa haddii Ilaah idmo qofkii si fiican u doodaya oo garnaqsanaya laakiin magac iyo e-mail la iska soo qortay uma jawaabi karo. Marka dhib uma arko haddii la iga gar helo oo la i aamusiyo.
Waxaa jirta dacaayad kale oo ay Soomaalidu sheegto, in haweenay garoob ah oo baayac mushtarad ahayd, xoogaana haystay guursatay nin dhalinyaro ah oo Baydhaba joogay. Waxay ninkii ka dhaadhicisay in ninkii haweentiisa hal mar utagaa uu la ajar yahay Cali Binu Abuu-Dhaalib (RC) oo afartan gaal seeftiisa ku dilay. Ninkii wuu iska rumaystay. Maalintiiba intaas oo jeer bay oranjirtay gaal dilaanee? Markaasuu isna dhihi jiray dilaanee isagoo ajar jihaad filaya. Muddo markay arrintaasi socotay ayaa ninkii naftii qabatay. Maalintii dambe ayey tiri gaal dilaanee? Markaasuu yiri Gaalo seeftii Cali (RC) dhamayn wayday ma dhamayn karo!
Marka sida C/hi ugu hayo waxaan idinka difaacin qolo kalee diyaar ma tihiin? Waan nahay. Waxaan idiin samayn gobollo cusub diyaar ma tihiin? Waan nahay. Waxaan idiin soo celin madaxweynanimadii diyaar ma tihiin? Waan nahay. Marka iyagaa maalinta dambe kasoo istaagin ee aan sugno.